अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प क्वारेन्टिनमा - हिपमत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प क्वारेन्टिनमा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्पसँगै क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।
ट्रम्पका सहयोगी होम हिक्सलाई बिहिबार राती कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि ट्रम्प क्वारेन्टिनमा बसेको सीएनएनले बताएका छन् ।
चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त ट्रम्प र संक्रमण देखिएको होप टेलिभिजन डिबेटका लागि सँगै एयर फोर्स वनबाट यात्रा गरेका थिए ।
ट्रम्पले बिहिबार राती ट्वीटमा लेखे, ‘सानो छुट्टी पनि नलिइकनै होप हिक्सले निकै मिहिनेत गरेर काम गरिरहेकी थिइन् । उनलाई हालै कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । भयानक ! फर्ट लेडी र म आ–आफ्नो परीक्षणको नतिजा कुरिरहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा हामी क्वारेन्टिन प्रक्रिया सुरु गर्छौं !’
ट्रम्पले हिक्ससँग थुप्रै पटक यात्रा गरेका छन् । मंगलबार मात्रै ट्रम्पले हिक्ससँग क्लिभल्याण्डमा आयोजित डिबेटमा सहभागि भएका थिए ।
‘उनलाई कोरोनाको संक्रमणको देखिएको छ । मैले भर्खरै यसबारे सुनेँ । उनलाई संक्रमण देखियो । उनी निकै मिहिनेती थिइन् । उनले असाध्यै मास्क लगाउँथिन् तर उनलाई संक्रमण देखियो । त्यसपछि मैले परीक्षण गराएँ । किनभने हामीले सँगै धेरै समय बिताएका छौं । त्यसपछि फर्स्ट लेडीको पनि परीक्षण गर्यौं,’ ट्रम्पले फक्स न्यूजसँगको टेलिफोन वार्तामा भने ।
शुक्रबार, आश्विन १६, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
सुजाता कोइराला पार्टी सभापतिको उम्मेदवार
ओली-प्रचण्डबीच आज भेट तर उपलब्धि शुन्य
कसको संलग्नतामा भयो पर्सा हत्याकाण्ड ?
तनहुमा सडक छेउमै रहेको अचम्मको घर ! के छ घर भित्र ? यस्तो छ बास्तविकता
जनप्रतिनिधि बाटै महिला बलतकृत
सके सहयोग गरौं,नसके सेयर- Help Post
पछिल्लो १२ घण्टामा मोरङमा मात्रै थप ६ सङ्क्रमितको मृत्यु
रसुवामा भालुको आक्रमण बढ्दै